Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka wuxuu aqbalayaa codsiyada deeqaha dhismaha ballaaran - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Hawlaha Guud ee Gobolka wuxuu aqbalayaa codsiyada deeqaha ee dhismaha ballaadhinta
In ka badan $ 43 milyan oo doolar oo deeq dowladeed ah ayaa loo heli karaa mashaariic ballaadhinta oo loogu talagalay bulshooyinka aan la ilaalin iyo kuwa aan laga faa'iideysan
OLYMPIA, Dhaq - - The Guddiga Hawlaha Guud ee Gobolka Washington (PWB) waxay aqbashaa codsiyada deeqaha dhismaha ee ballaadhinta ballaadhan hadda illaa Oktoobar 1, 2021. Magaalooyinka, magaalooyinka, gobollada, ujeeddooyinka gaarka ah ee degmooyinka iyo Qabiiladu waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
Waa muhiim in taas la xuso RCW 43.155.160 (5) (o) waxay u baahan tahay codsadayaasha inay la xiriiraan bixiyeyaasha adeegga internetka ee maxalliga ah (ISPs) oo u dhow aagga mashruuca la soo jeediyey ugu yaraan lix toddobaad ka hor inta aan loo gudbin dalab ku saabsan maalgelinta guddiga. Xiriirkan ayaa ah in la codsado qorshaha ISP si kor loogu qaado adeegga ballaadhinta aagga mashruuca si loo gaadho xawaaraha buuxiya ama dhaafeeya qeexitaanka gobolka ee adeegga ballaadhinta muddada ku jirta muddada mashruuca la soo jeediyey. Codsadeyaashu waa inay soo gudbiyaan dukumiintiyada isdhexgalka iyaga iyo codsigooda.
Webinar codsi July 28
Wixii hagitaan ah ee ku saabsan dhammaystirka arjiga, isdiiwaangeli si aad uga qaybgasho meherad bilaash ah webinar codsi markay tahay Luulyo 28, 2021 10 am ilaa 12 duhurnimo.
"Guddiga Howlaha Guud wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo furitaanka wareegeenna qadka dhismaha oo ay la socoto lacagaha deeqaha ee ay bixiso dowladda dhexe," ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Kathryn Gardow. Helitaanka adeeg xawaare sare oo xawaare sare leh ayaa muhiim u ah xiritaanka kala qeybsanaanta dijitaalka ah waana muhiimadda koowaad ee gobolka iyo Guddigu si loo hubiyo adeegga ballaaran ee bulshada gobolka Washington. Guddiga Hawlaha Guud wuxuu rajeynayaa inuu noqdo ilo xasilloon oo lagu maalgeliyo kaabayaasha dhaqaalaha, oo ay ku jiraan qadka dheereynta, muddo dheer mustaqbalka. ”
Qiimeynta iyo qiimeynta ayaa bilaabaneysa isla marka la xiro wareegga arjiga, sidoo kale howsha loolanka ISP. Ogeysiinta abaalmarinta deeqda ayaa la filayaa bisha Nofembar.
Fadlan booqo Guddiga Hawlaha Guud Maalgelinta Broadband bogga wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u dalbato.
broadbandDeeqaha bulshada iyo amaahdakaabayaashaWar-saxaafadeedGuddiga Howlaha Guud
← Warbixintu waxay soosaaraysaa talooyin ku saabsan wax ka qabashada baahiyaha daryeelka caafimaad ee aan la daboolin ee kuwa hadda shaqeeya iyo kuwii hore ee goobta Nuclearka Nuclearka Eeyaha Maxkamadda - cusbooneysiin →